Imibandela Yensizakalo - Izakhiwo Nezindlu zeNW & NY, i-Selectate, Defence Defence ne-Bankruptcy Lawyers
Ikhaya / Imigomo Yesevisi
Imibandela Yokusebenza ye Focuselaw.com
Imininingwane oyithola kuleli sayithi akuyona, futhi ayihloselwe ukuba, izeluleko zomthetho. Singabameli, noma kunjalo, asibona abameli bakho uze usayine isivumelwano sokugcina nathi. Kufanele uthintane nommeli ukuze uthole izeluleko maqondana nesimo sakho, ungasebenzisi noma yini oyithola kwi-inthanethi njengesisekelo sokuzivikela. Sicela usithinte nganoma yimiphi imibuzo. Samukela izingcingo zakho zocingo, izincwadi, kanye ne-imeyili. Ukuxhumana nathi akwenzi ubudlelwane bommeli-amaklayenti. Sicela ungathumeli imininingwane eyimfihlo kithi kuze kube yilapho ubuhlobo bommeli nekhasimende sebusunguliwe futhi sicela imininingwane. Kungenzeka ukuthi kungenzeka ukuthi sesivele simela olunye uhlangothi nganoma iyiphi inkinga obhekene nayo. Bonke ubufakazi kuleli sayithi buthathwe kuzibuyekezo zikaGoogle, naku-Yelp. Uma ungathanda izinkomba, sicela usithumele isicelo sakho nge-imeyili [Email protected] futhi sikwazi ukukunikeza okuningi.
SiyiNew York neNew York Trusted Consumer Defense Law Firm, Izakhiwo Nezindawo, Umthetho Womndeni, futhi Khetha umthetho wezomthetho
Sigxile ekusizeni imindeni namabhizinisi amancane.
Lesi siza sikhangiso